Fanafihan'ny fahazavana ny resaka buzzwordsmithiness amin'ny fifandraisana
Alakamisy, Desambra 22, 2016 Alakamisy, Desambra 22, 2016 Douglas Karr
Namako efa taona maro i Steve Woodruff, izay nilaza tena (ary tena manan-talenta) Clarity Consultant, dia mbola mizara fizarana marketing somary mahatsikaiky eo amin'ireo tranonkala sy ny mombamomba ny media sosialy. Nozarainy tamiko ny tiany indrindra hatramin'ny roa taona lasa izay: nanao làlana ho an'ny fitomboana maharitra sy tarihan'ny mpanjifa izahay mifototra amin'ny fitsipiky ny rafitra sarotra ampifanarahana. Ity dia drafitra vaovao ho an'ny paikady ho an'ity tontolo iharan'ny fanovana lalina anaty:
Torolàlana amin'ny fandrefesana ny fahombiazan'ny marketing B2B
Alarobia, Novambra 26, 2014 Talata, Desambra 2, 2014 Douglas Karr
Orinasa maro no miady mafy amin'ny famaritana sy fampivelarana mari-pamantarana marimaritra iraisana amin'ny ezak'izy ireo amin'ny asa aman-draharaha. Ity infographic avy amin'ny vahaolana g2m ity dia fitambaran'ireo mari-barotra momba ny marketing B2B izay nohazavaina bebe kokoa tao amin'ny bokin'izy ireo amin'ny fandrefesana ROI Marketing ROI. The SMART Approach to Marketing Analytics SMART dia fanafohezana ny fomba fanao mahazatra amin'ny ezaka marketing rehetra: Safidio izay handrefesana refesina io hamakafaka ny fahitana lehibe hamerenana ny fiantraikan'ny fitsapana ny tetika.